Kodwa ukuba uye phi? Nokuba lixesha yakho okokuqala okanye yeshumi yakho, kwawethu umthamo koololiwe olukhoyo kunokubangela uxinezeleko, ukudideka kunye nokoyika lilonke ilahlekelwa. Ungakhathazeki ukuba – ngenxa yokuba siye Sihlangene apha uluhlu ibhakede 5 best neengqukuva aseYurophu uhambo ngololiwe. Hlala phantsi, bophelela phezulu, kwaye ngaphandle igumbi baguettes zintle yaseFransi, kuba mhlawumbi uza kuba no- ukhwele.
Kanjalo, IParis ngaphezu embindini walo mzi. Esi sixeko ifike ilikhaya kubantu abangaphezu kwezigidi ezibini, nto leyo ethetha ukuba uchithe iiveki apha ngaphandle ukuzikrwempa ngokwenyaniso phezu oko kumele anikele. Gateway uhambo namhla ingxokolo kwi-Pont Alexandre III kunye nentloko ku Versailles, apho Royal Palace nangoku uyabusa tlakukeke nangona zezithuba wayo ukususela yee-1700. amatikiti Usuku nje € 20 yaye ziquka ungeno kwi Palace, i Gardens nokunye okuninzi. Kanangcono, oololiwe izakusebenza kumbindi wesixeko ngqo ukuya Palace, leyo eyenza ukufumana kukho impepho. Le interconnectedness kwenza ngokusemthethweni Paris enye izihloko yethu yaseYurophu uhambo ngololiwe.
Enye siqu wam imizi ozithandayo kunye nje iiyure ezimbini eParis kukho ikomkhulu United Kingdom: London. Le kwembiza ephuphumayo yokunyibilikisa yeenkcubeko ilikhaya ephezulu abantu kwezigidi ezilithoba kwiinkalo zonke zobomi. Ukusuka Posh Chelsea ukuba ngomoya ABU, uya kufumana imisebenzi wonke iqela lakho. Catch omnye nomculo zakutshanje ngaphambi kokuba phezu Globe Shakespeare kwaye agqibezele ubusuku lakho ungayekwa, inqaba zonke e London.
I Eurostar-high speed ngololiwe ekuthathela kuyo KDE ukusuka eParis kwiziko London kwisithuba ezimbini nje iiyure, nto leyo ethetha ukuba uya kuchitha ngaphantsi ixesha ohambahambayo ngaphezulu ixesha adventuring. Ngaloo ndlela, siqwalasela London ukuba omnye zeengqukuva best yaseYurophu ukuba ahambe ngetreyini.
Hluke kwezihloko Western European, Prague ikomkhulu Czech Republic eMpuma Yurophu omnye kakhulu izixeko edume European Central. Ekhaya ukuya kwenye lamathala idumileyo ehlabathini, i Klementium, Prague libonisa inkcubeko yalo ngeenxa zonke iimbombo. Tyelela i Clock Astronomical, iwotshi yokusebenza indala ehlabathini. Thatha Ubuko Old Town Square, apho izitalato zenziwe ngamatye agranyagranya kunye nemizila pedestrianized kuthetha ukuba bachithe iiyure ezula ngaphandle kwexhala.
IYurophu indawo enkulu nezohlukeneyo ogama Union kuthetha kulula yayo kunangaphambili ukuba uhambo ngololiwe. Thatha ithuba kumazwe kwemida wanduluka ukuya kwezi iingqukuva yimbali ngexesha lakho. Tsiba Intloko-moya kunye nezihlwele zayo kunye nokutya moya overpriced kwaye usebenzise uloliwe lokuya. Enoba hop indlela yengingqi kwibhodi okanye tirhisa eyongezelelweyo elincinci kuba apha-high speed kaloliwe, uya kunandipha i uhambo ngololiwe, i indawo kunye okuninzi yonke.
Siye waba wayifulela iincam zokuhamba. Ngoku ixesha ngayo ukuba ukubhukisha ezinye amatikiti etreyini! Gcina A Isitimela yindawo ukuba bathenge amatikiti etreyini.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best European Capitals ukuba ahambe ngetreyini” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)